डेढ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ३०० किलो तौलको विश्वकै ठूलो ताला किन बनाइयो ?
Homeविश्व खबरडेढ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ३०० किलो तौलको विश्वकै ठूलो ताला किन बनाइयो ?
March 18, 2021 Desk 1 विश्व खबर
एउटा तालाको तौल ३ सय किलो र यसलाई बनाउने खर्च डेढ लाख रुपैयाँ । धति धेरै मेहनत र पैसा खर्च गरेर यो विशाल ताला किन बनाइयो होला ? करिब ७० प्रतिशत काम सकिएको यो तालाको बारेमा सुन्नेहरु छक्क पर्छन् । भारतको अलीगढको ज्वालापुरीमा यो ताला बनेर तयार भइसकेको भए पनि यसलाई अझै सुन्दर लुक दिनको लागि केही परिवर्तन गरिँद
परिवर्तनपछि यसको तौल ३५० किलोसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।यो ताला विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ताला हुने दावी गरिएको छ । अलीगढका ताला कालीगढ सत्यप्रकाश शर्मा र उनकी पत्नी रुक्मणी शर्माले मिलेर यो विशाल ताला तयार गरेका हुन् । यसलाई बनाउन सत्यप्रकाशका साला शिवराज शर्मा र उनका छोराछोरीले पनि सहयोग गरेका छन् ।
शहरको रामसन्स लक्सका राजीव कुमारको अर्डरमा यो विशाल ताला तयार गरिएको हो । ६ फिट २ इन्च लामो र २ फिट साढे ९ इन्च फराकिलो यो ताला बनाउन ६५ किलोभन्दा धेरै पितल प्रयोग गरिएको छ ।सत्यप्रकाशका अनुसार ताला बनेर तयार भइसकेको छ तर यसलाई अझै राम्रो आकार दिन यसका कडा बदल्ने निर्णय गरिएको छ ।
कडा बदलेपछि यसको तौल ३५० किलो पुग्नेछ । रामसन्स लक्सका राजीव कुमारका अनुसार ७० प्रतिशत काम भइसकेको छ । तालानगरी भनिने अलीगढका मानिसहरुले यसलाई देखेर गर्व महसुस गर्नेछन् । ताला तयार भएपछि यसलाई भव्य रुपले सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।यो विशाल ताला बनाउन रुक्मणी, सत्यप्रकाश र शिवराज लकडाउनको समयदेखि नै जुटेका हुन् ।
यसको अर्डर लकडाउन भन्दा पहिले नै दिइएको थियो । सत्यप्रकाशका अनुसार अहिले ६ लिभरको ताला तयार भएको छ । यो ताला खोल्ने साँचो ३ फिट ४ इन्ट लामो छ र साँचौको मात्रै तौल २५ किलोभन्दा बढी छ । सत्यप्रकाशका पिता भोजराज शर्मा पनि प्रसिद्ध ताला कालिगढ थिए । उनले ४० किलोभन्दा अधिक तौलका ताला बनाएका थिए ।
बेपत्ता झा दम्पतीको खोजी सिआइबीले थाल्यो
ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ ५ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका हुन् । यो मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक हो । आजको बैठकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कुनै निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ । साथै आजको बैठक नियमित भएकाले नियमित कार्यसूचीका […]
धनुषा । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर २ मा आफ्ना चार प्रदेशसभा सदस्यलाई बर्खास्त गरेको छ । पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण जवाफ नदिएका कारण माओवादी केन्द्रले कारवाहीस्वरुप उनीहरुलाई बर्खास्त गरेको हो । बर्खास्तमा पर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वाला साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीर रहेका छन् । उनीहरुलाई […]
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा भित्रीए ५३ टिपर
पाल्पाको तिनाउ टिपर व्यवसायी संघले चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई ५३ टिपर निर्माण सामग्री सहयोग गरेको छ । व्यवसायी संघमा आवद्ध २९ वटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरु मिलेर रंगशालाका लागि सो परीमाणको निर्माण सामग्री सहयोेग गरिएको हो । आइतबार दिउँसो ५३ वटा टिपरले तिनाउबाट निर्माण सामग्री बोकेर चितवनको […]
पछिलो २४ घन्टामा थप ३६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं, नेपालमा पछिलो २४ घन्टामा थप ३६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज ३१२५ जनाको पीसीआर परिक्षण गर्दा ३०३ जनामा र ६९० जनाको एन्टी जेन परिक्षण गर्दा ६४ जना गरि कुल ३६७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको […]
जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै सत्ता सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार
काठमाडौं, २९ चैत । जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै सत्ता सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कमा आइतबार बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै महतोले ओली सरकारमा जान सकिने बताएका छन् । उनले जसपाका माग कार्यान्वयनको चरणमा गएको भन्दै […]
साङ्लाको डरले पत्नीले सर्न लगाइन् १८ पटक डेरा, हैरान भएका पति माग्दैछन् डिभोर्स
भारतको मध्य प्रदेशको राजधानी भोपालमा साङ्लाको डरले एक महिलाले पटकपटक डेरा सर्न लगाएकी छन् । यस दम्पतीको विवाह भएको तीन वर्ष भएको छ र यसबीचमा उनीहरूले १८ [...]
भारतको बेंगलुरुमा कोभिड लकडाउनका कारण जागिर खुस्केपछि एक व्यक्ति गोप्य रूपमा पुरुष वेश्या बनेका छन् । उनको यो धन्धा थाहा पाएपछि पत्नीले पारपाचुकेका लागि निवेदन दिएकी छन् [...]
ओली सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ : राजेन्द्र महतो
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सत्ता समीकरणको विषय संसद्मा प्रवेश नगरेसम्म यसबारेमा नबोल्ने निर्णय गरेको छ । आइतवार साँझ बसेको जसपाको शीर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको [...]
लौकाको पकौडा, यसरी बनाउनुस्
एजेन्सी,गर्मीमा पाइने लौका धेरैजनालाई मन पर्दैन । तर यसलाई स्वादिष्ट परिकार बनाएर खान सकिन्छ । यहाँ हामी तपाईंलाई लौकाको पकौडा बनाउन सिकाउँछौं । यो बनाउन सजिलो छ [...]
कोरोना संक्रमणपछि ‘होम क्वारेन्टीन’मा आलिया
एजेन्सी, अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को दोस्रो लहरको चपेटामा भारत फसेको छ। भारतमात्रै हैन विश्वका धेरै मुलुक कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित छ । केही दिन पहिले बलिउडकी चर्चित [...]